Baịbụl abụghị akwụkwọ na-azi banyere ego. Ma, o nwere ezigbo ndụmọdụ ndị nwere ike inyere di na nwunye aka izere nsogbu ego. Ọ́ gaghị adị mma ka unu tụlee ndụmọdụ ndị dị na ya ma nwalee aro ndị na-esonụ a tụrụ?
1. Mụtanụ iji olu ọma ekwurịta banyere ego.
“Ndị na-agba izu na-enwe amamihe.” (Ilu 13:10) Otú e si zụlite gị nwere ike ime ka ọ na-esiri gị ike ịgwa ndị ọzọ okwu ego, karịsịa di gị ma ọ bụ nwunye gị. N’agbanyeghị nke ahụ, ọ bụ ihe amamihe dị na ya unu ịmụta ikwurịta okwu a dị mkpa. Dị ka ihe atụ, ọ́ gaghị adị mma ka ị kọwaara di gị ma ọ bụ nwunye gị otú i chere otú nne na nna gị si ele ego anya si metụta gị? Gbalịakwa ka ị ghọta otú otú e si zụlite di gị ma ọ bụ nwunye gị sirila metụta otú o si ele ego anya.
2. Kwekọrịtanụ otú unu ga-esi na-ele ego unu na-akpata anya.
“N’inye ibe unu nsọpụrụ, na-ebutenụ ụzọ.” (Ndị Rom 12:10) Ọ bụrụ naanị gị na-akpata ego, i nwere ike ịsọpụrụ di gị ma ọ bụ nwunye gị ma ọ bụrụ na i lee ego ị na-akpata anya dị ka ego ezinụlọ unu, ọ bụghị ego gị.—1 Timoti 5:8.
3. Deenụ atụmatụ unu edee.
“Atụmatụ onye dị uchu aghaghị iweta uru.” (Ilu 21:5) Otu ụzọ unu ga-esi mee atụmatụ maka ọdịnihu ma zere imefusị ego unu tara ahụhụ kpata bụ ịhazi otú unu ga-esi na-emefu ego. Nina, bụ́ onye lụrụla di afọ ise, kwuru, sị: “Ide ego ole unu na-akpata na ego ole unu na-emefu n’akwụkwọ ga-emepe unu anya. O siri ike ịgbagha ihe e dere ede.”
4. Kwekọrịtanụ onye ga-eme nke ọ ga-eme.
“Mmadụ abụọ ka otu onye mma, n’ihina ha na-enweta ezigbo ụgwọọrụ maka ndọlị ha.” (Ekliziastis 4:9, 10, Baịbụl Nsọ Nhazi Katọlik) N’ezinụlọ ụfọdụ, ọ bụ di na-ahụ maka ego. Ná ndị ọzọ, ọ bụ nwunye na-arụ ọrụ a, rụzie ya arụzie. (Ilu 31:10-28) Ma, ọtụtụ di na nwunye na-ahọrọ ike ọrụ a eke. Mario, bụ́ onye lụrụla nwaanyị afọ iri abụọ na otu, kwuru, sị: “Nwunye m na-ahụ maka ịkwụ ụgwọ ndị dị ka ụgwọ ọkụ na obere ụgwọ ndị anyị na-akwụ. M na-ahụ maka ịkwụ ụtụ isi, ịkwụ ụgwọ ihe ndị anyị zụrụ, na ịkwụ ụgwọ ụlọ. Anyị na-agwa ibe anyị otú ihe si na-aga ma na-arụkọ ọrụ ọnụ.” N’agbanyeghị otú unu kpebiri isi na-eme ya, ihe dị mkpa bụ ka unu na-emekọ ihe ọnụ.
^ para. 7 Baịbụl kwuru na “di bụ isi nke nwunye ya.” N’ihi ya, ọ bụ ọrụ ya ikpebi ihe a ga-eji ego ezinụlọ ha eme na ịhụ na o ji ịhụnanya na-emeso nwunye ya ihe n’achọghị ọdịmma onwe ya naanị.—Ndị Efesọs 5:23, 25.
Olee mgbe ikpeazụ mụ na di m ma ọ bụ nwunye m ji olu ọma kwurịta banyere ego?
Olee ihe m nwere ike ikwu ma ọ bụ mee iji gosi di m ma ọ bụ nwunye m na obi dị m ụtọ n’ihi otú o si na-enye aka n’ihe metụtara ego n’ezinụlọ anyị?
mailto:?body=Ijizi Ego Ejizi%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2009564%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ijizi Ego Ejizi